बाबुरामलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्नका लागि गठबन्धन गरेनौँ : दिपकबाबु कँडेल [अन्तर्वार्ता] « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका दलहरु नै प्रतिस्पर्धामा छन् । पुर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको गृहनगर भएकोले पनि पालुङटार चर्चामा छ । त्यहाँ जसपा र नेपाली कांगे्रसबीच तलमेलको लागि पहल भए पनि तालमेल हुन सकेन । यो चुनावमा कांगे्रस, माओवादी र जसपाबीच त्यहाँ कटाक्ष हुने आंकलन गरिएको छ ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यहाँ नेपाली कांगे्रसबाट दिपकबाबु कंडेलले मेयरमा जितेका थिए । कंडेल आफुले पाँच वर्षमा धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको भन्दै फेरि पनि मेयरमा उठेका छन् । यो पाँच वर्षमा गरेका कामको समिक्षा र आगामी एजेण्डाको विषयमा कंडेलसँग अनलाईनपानाका लागि रामनाथ कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
पालिका चुनावको तयारी कस्तो हुँदै छ ?
जनतालाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले हामीले तयारी गरिरहेका छौं । मेरो नतृत्वमा गत पाँच वर्ष पालुङटार नगरपालिकाले गरेका कामहरुलाई अझै जीवन्त राख्ने र बाँकी रहेका कामहरुलाई सही ढंगले पुरा गर्नका लागि मैले फेरि उम्मेदवारी दिएको हो । मेरो मुख्य लक्ष्य पुर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई महत्व दिएर अगाडि बढ्ने हो । नगरवासीको घरदैलोमा जाने र प्रचारप्रसारका कामहरु हामीले गरि नै रहेका छौं ।
पालुङटारवासीले तपाईँलाई फेरि पनि किन मतदान गर्ने तपाईँका मुख्य एजेण्डाहरु केके छन् ?
पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा, बाटो नै मुख्य जग हो । नगरपालिकाका सबै टोलमा पक्की बाटो पुर्याउने मेरो पहिलो लक्ष्य हो । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई दोस्रो महत्वमा हामीले राखेका छौँ । नदीले बनाएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो टार पालुङटार हो । यहाँ कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएर काम गर्दा राम्रो उपलब्धि हाँसिल हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । पम्पिङ स्टेशनका खानेपानीहरु बनाउने छौँ । महिनामा कम्तिमा पनि ५ युनिटको विजुलीको महसुल नगरपालिका तिर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ । यहाँका डाँडा काँडाहरु उजाड छन् । सामाजिक कल्याणकारी कामहरु पनि हामी गरिराखेका छौँ । त्यसलाई अझै बढोत्तरी गर्दै जाने छौं । शिक्षाको क्षेत्रलाई गुणस्तर बनाउँदै लैजाने छौं । त्यसैगरी नगर अस्पताल बनाउने योजना छ ।
यी कामहरु गत पाँच वर्षमा गर्नु सक्नुभएन ?
पाँच वर्षमा हामीले नगरपालिकाको पुर्वाधार निर्माणलाई धेरै महत्व दिएका छौं । नगरपालिका भवन, वडा कार्यलय भवनहरु, नगरपालिकाको सदरमुकामदेखि सबै वडा कार्यलयहरुसम्म बाटो कालो पत्रे गर्ने जस्ता काममा बढी महत्व दिएको हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ । नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ४२ वटा कानुन, कार्यविधि र नियमावलीहरु बनाएका छौँ । ती कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
पाँच दलीय गठबन्धन किन असफल भयो पालुङटारमा ?
बाबुराम भट्टराई जस्ता बेइमान मान्छेलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्नको लागि गठबन्धन गरिएन । उहाँले राजनीतिमा बेइमानी गर्नुहुन्छ । गत चुनावमा पनि मैले बाबुरामलाई आँखामा भोट हालेको हो । हामीले भोट हालेर जितेको एक महिना नपुग्दै नेपाली कांगे्रसलाई प्रतिपक्षमा राख्न पर्छ भन्नुभयो । हाम्रो भोटले चुनाव जित्ने हामीलाई नै गाली गर्दै हिँड्ने भनेको राजनीतिक बेइमानी हो । त्यसैले गर्दा यहाँ गठबन्धन हुन सकेन ।
पालुङटारमा माओवादी र जसपा पनि बलियो छ भनिएको छ । कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
जसपा त्यति बलियो छैन । पालुङटारमा अलि अलि देखिएकै हो, गोरखा जिल्लामा छैन । बाबुराम जी आफैँ आएर यहाँ भोज भतेर गर्ने, खसी काटेर खुवाउने काम गर्नुभएको छ । गाउँ वस्तीहरुमा गएर, चोक चोकमा गएर खसी काटेर भोज खुवाउने जस्ता आचारसंहिता विपरितका कामहरु पनि गरिराख्नुभएको छ । देशको पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो आचारसंहिता विपरीतको काम गरिराख्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालका फोटोहरुले यो कुरा प्रमाणीत गर्छ । सबै देखिसकेका छन् । हिजो राति पनि पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर दुईमा करिब दुई बजेसम्म भोज चलिरहेको थियो । बाबुराम र गण्डकी प्रदेशका मन्त्री हरिशरण आचार्य समेत भएर यस्तो गरिराख्नुभएको छ । यो कुरा माओवादी नेता नारायकाजी श्रेष्ठलाई पनि थाहा छ । यो चुनावमा हाम्रो र माओवादीको भने प्रतिस्पर्धा कडा हुने देखिएको छ ।
जसपासँग गठबन्धनको कुरा कहाँनेर मिलेन ?
हामीले गठबन्धन गर्न चाहेका नै थिएनौँ । हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यति कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । त्यसैले उहाँले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिन केन्द्रले गरेको निर्णय मान्नुभएन नि ?
मैले पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्छु भनेकै हो, मान्छु पनि । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नै जानीबुझिकन निर्णय ढिलो पठाएको हो । त्यसो हुनाले मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिएको थियो । उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय ५ बजेसम्म थियो तर निर्णय पाँच बजेर तीस मिनेटमा आएको हो ।
जसपाले उपमेयरमा उम्मेदवारी फिर्ता लियो । तर तपाईँहरुले मेयरमा फिर्ता नलिदा धोका दिएको आरोप छ नि ?
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ । जनतालाई बाध्य बनाउन मिल्दैन । जनताको पक्षमा कुनै महत्वपुर्ण मुद्धा भए गठबन्धन गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले जरुरी हो जस्तो मलाई लाग्दैन् ।
तपाईँले जित्ने आधार के छ ?
पालुङटारमा हामीले विकासको एउटा खाका तयार गरेका छौं । त्यही खाकालाई पुरा गर्नको लागि पालुङटारवासीले मलाई भोट हाल्न जरुरी छ । कुनै पनि योजना पुरा हुनु आधा काम हुनु हो भनेझै हामीले आधा काम गरेका छौं । त्यसलाई पुरा गर्नु छ । यो पाँच वर्षको काम हेरेर नै पालुङटारवासीले मलाई भोट हाल्नुहुन्छ ।
अन्त्यमा, पालुङटारवासीलाई केही भन्नु छ ?
पालुङटारको प्रमुख हुँदा मैले भ्रष्टचारलाई कुनै गन्ध आउन दिएको छैन् । समुन्नत पालुङटार र सम्मानीत पालुङटारवासी बनाउनको लागि पालुङटारवासीले मलाई भोट हाल्न जरुरी छ र हाल्नुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २५, २०७९ आईतबार ४ : १५ बजे